एक, दुई, तीन होइन, यी महिलाले ज’न्माइन एकैसाथ ६ ब’च्चा ! – Onlines Time
January 15, 2021 January 15, 2021 onlinestimeLeaveaComment on एक, दुई, तीन होइन, यी महिलाले ज’न्माइन एकैसाथ ६ ब’च्चा !
तपाईँले जुम्ल्याहा, तिम्ल्याहा बच्चा जन्मेको त सुन्नु भएकै थियो ।एक महिलाले एकसाथ ६ बच्चा जन्माएकी छन् ।भारतको मध्य प्रदेशको एक अस्पतालले एक महिलाले एक पटकमा ६ बालबालिकाको जन्म दिएको पुष्टि गरेको छ ।
सायद विनोद र अनिताको सुखद् जीवन दैवलाई रुचेन । अनितालाई एक्कासी टाउको दुख्ने रो’गले सताउन थाल्यो । उनीहरूले चेकअप गराए । चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि खान थालिन् अनिता । औषधिले सायद काम गरेन । उनलाई ब्रेन हेमरेज भयो । त्यो घ’टनाले विनोदले सारा खुशी र सपना ऐना फुटेसरह टुक्राटुक्रामा परिणत भएको महसुस गरे । तर पनि श्रीमतीलाई जसरी पनि बचाउने अभियानमा लागे । श्रीमती बिनाको जीवन अधुरो सोचिसकेका उनले पैंसा, समय, हेरचाह जे–जे आवश्यक पर्छ, सबै जोहो गर्ने अठोट गरे । र लागे राम्रो भन्दा राम्रो उपचारको खोजीमा ।
“देवीको रुपमा घरमा भित्रिएकी थिइन् । मेरो बुबाआमाले पनि औधी माया गर्नुहुन्छ । अनिताको व्यवहार पनि निकै मायालु छ” विनोद भन्छन्, “श्रीमान्ले आफ्नी श्रीमतीलाई इज्जत र माया दुवै दिनुपर्छ । श्रीमान्ले माया गरे सबैले माया गर्छन् ।” अनिताको प्रवेशले घर परिवारमा माया, ममता, सुख सबै भित्रिएको बताउने विनादे उनी बि’रामी भएपछि परिवार तितरबितर भयो भन्छन् । बुबाआमा गाउँमा, छोरी फुपूहरूसंग । आफू अनिताको स्यारसुसारमा ।
गोरखपुर काण्ड: दिपक र रसुले रुँदै गरे छुट्टिने निर्णय; तर सरुले भनिन् म छाड्न सक्दिन (हेर्नुस् भिडियो)